MS Office မှ LibreOffice သို့ကူးပြောင်းခြင်းကိုပိုမိုလွယ်ကူအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ Linux မှ
အလက်ဇန်းဒါး (ခေါ် KZKG ^ ဂါရာ) | | GNU / Linux များ, အကြံပြုပါသည်
Office suite သည်မည်သည့်ရွှေ့ပြောင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင်မဆိုရွှေ့ပြောင်းလုပ်ကိုင်ခြင်းလုပ်ငန်းခွင်၌သာမကအိမ်သုံးအသုံးပြုသူများအတွက်ပါအခြေခံကျသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤအရာသည်နက်နဲသောအရာမဟုတ်ပေ။ အခြားသူတစ် ဦး အား GNU / Linux သို့ပြောင်းရန်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုအကြံပေးသည့်အခါမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများမှာ - "ငါဒီလို MS Office ဖိုင်ကိုဖွင့်လို့ရမလား" အတိအကျဆိုရလျှင် GNU / Linux ရှိ Office suite ကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးသောအရေးကြီးမှုသည်ကျွန်ုပ်၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်နေစေပါသည်။ တစ်နည်းပြောရရင် GNU / Linux ကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုဖို့နဲ့ desktop ကွန်ပျူတာဈေးကွက်ကိုတစ်ချိန်ကကျော်လွှားနိုင်ဖို့အတွက်ပိုမိုအဆင့်မြင့်တဲ့ဗွီဒီယိုအယ်ဒီတာ (သို့) နောက်ဆုံးပေါ်ရုပ်ပုံအယ်ဒီတာမလိုအပ်ပါဘူးလို့ငါယုံကြည်တယ်။ of Photoshop, Steam ကဲ့သို့သောဂိမ်းစက်ပင်မဟုတ်ပါ။ အသွင်ကူးပြောင်းရေးကိုပိုပြီးလွယ်ကူအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်။
ကွန်ပြူတာများစွာတွင် GNU / Linux စက်ရုံကိုတပ်ဆင်ခြင်းသည်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်အတွက်သေချာသည်။ သို့သော်ဥပမာအားဖြင့်၊ ရုံးသုံးလူကသင်အလုပ်လုပ်သောဖိုင်များကိုဖွင့်ရန်သင့်အားခွင့်မပြုပါကမည်သည့်အကူအညီဖြစ်မည်နည်း။ ဒီအကြောင်းကြောင့်၊ GNU / Linux ကိုကြိုးစားအသုံးပြုလိုတဲ့သူတွေကိုငါအကြံပြုတဲ့အချက်တွေထဲကတခုကတော့ Windows မှာအလုပ်လုပ်တဲ့အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ application တွေကိုစတင်သုံးစွဲခြင်းဖြစ်တယ်။ ဤနည်းအားဖြင့်အကူးအပြောင်းသည်ပိုမိုချောမွေ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ငါ LibreOffice, VLC, GIMP နှင့် Firefox ကိုအခြားသူများအကြားထည့်သွင်းလိုက်တယ်၊ ဒါကြောင့်သူတို့က၎င်း၏ interface နှင့်ယေဘူယျလည်ပတ်မှုနှင့်အကျွမ်းတဝင်ရှိသည်။
ငါပြီးခဲ့သည့်အတိုင်း LibreOffice ၏အထူးကိစ္စသည်အထူးအရေးကြီးပြီး၎င်းသည်ပြandနာမရှိဘဲဖြစ်သည်။ ဤလမ်းညွှန်စာအုပ်သည်ရုံးခန်းအစုံအလင်ကိုကြိုးစားဆုံးဖြတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ရန်နှင့်ဤပရိုဂရမ်ကိုအသုံးပြုခြင်း၏အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကိုကူညီရန်ရည်ရွယ်သည်။
1 ဘာကြောင့် LibreOffice ကိုပြောင်းရသလဲ။
2.2 Macros အလုပ်မလုပ်ဘူး
2.3 စာရွက်စာတမ်းများကိုတည်းဖြတ်။ မရပါ
2.4 လုပ်ဆောင်နိုင်မှုသို့မဟုတ်အမှားအယွင်းများ (bug များ)
3.2 LibreOffice သို့ရွှေ့ပြောင်းမှု protocol ကို
3.3 Microsoft Fonts ကို Install လုပ်ပါ
ဘာကြောင့် LibreOffice ကိုပြောင်းရသလဲ။
ကအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ MS Office နှင့်မတူသည်မှာငွေပေးစရာမလိုပါ ငွေအမြောက်အမြား အဲဒါကိုသုံးနိုင်ဖို့။ ၎င်းသည်သူ့ဟာသူသုံးစွဲသူတစ် ဦး အတွက်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောအကြောင်းပြချက်ဖြစ်နိုင်သော်လည်း၎င်းသည်စီးပွားရေးကွန်ပျူတာများတစ်ခုချင်းစီအတွက်ရုံးဆော့ဖ်ဝဲမိတ္တူတစ်အုပ်ကိုသာအသုံးပြုလေ့ရှိသောအသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအပေါ် ပို၍ ပင်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ လူအများစု၊ ကုမ္ပဏီအချို့သို့မဟုတ်ပြည်နယ် (များ) ကိုယ်တိုင်ပင် MS Office ၏ခိုးကူးမိတ္တူများကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ဤပြproblemနာကိုရှောင်ရှားလိုကြသည်။ LibreOffice သည်လွတ်လပ်ပြီးလုံခြုံသောရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
၎င်းသည်အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲဖြစ်သည်။ အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲအားလုံးကဲ့သို့ LibreOffice သည်စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်မှုများကိုရရှိသည်၊ ၎င်းသည်ပရိုဂရမ်၏လုံခြုံရေးနှင့်တည်ငြိမ်မှုကိုတိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ထို့အပြင် LibreOffice တွင်လုပ်ဆောင်မှုအသစ်များနှင့်အမှားများကိုပြင်ဆင်ရန်အတွက်အဆက်မပြတ်လုပ်ဆောင်နေသည့်တက်ကြွသောအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
အခမဲ့ formats ကိုသုံးပါ: DOC, WPD, XLS သို့မဟုတ် RTF နှင့်မတူဘဲ၎င်းတို့ဖန်တီးသူများသာကောင်းစွာသိသောပိတ်ထားသောပုံစံများဖြစ်သော LibreOffice သည် ODF အခမဲ့ပုံစံသောဖြစ်လာခဲ့သည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစံက ISO 26300: 2006။ ပွင့်လင်း။ စံပုံစံကိုအသုံးပြုခြင်းသည်သင်၏စာရွက်စာတမ်းများကိုခေတ်နောက်ကျသွားအောင်တားဆီးပေးပြီး၎င်းကိုနောင်တွင်ဖွင့်လှစ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
ပလက်ဖောင်းမျိုးစုံဖြေ - Windows၊ Mac နဲ့ Linux တို့အတွက် LibreOffice ဗားရှင်းတွေရှိတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်သင်သည်အိမ်၌နှင့်အလုပ်တွင်တူညီသောလည်ပတ်မှုစနစ်ကိုအသုံးမပြုပါကပြောင်းလဲမှုကိုပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။
MS Office ဖဲကြိုး interface ကိုသင်မကြိုက်ဘူး။ အသုံးပြုသူများစွာသည် MS Office ကိုစွန့်ခွာလိုကြသည်။ LibreOffice တွင် "ဂန္ထဝင်" အမြင်အာရုံမျက်နှာပြင်တစ်ခုရှိပြီး၎င်းသည် MS Office interface ဟောင်းတွင်အသုံးပြုသူများအတွက်အကူးအပြောင်းကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေသည်။
ကျော်သွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြီးသားတွေ့ခဲ့ရပြီ။ သို့သော်မည်သည့်ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများကဲ့သို့ပင်ပြproblemsနာများပေါ်ပေါက်နိုင်သည်။ အသုံးအများဆုံးအချို့ကိုကြည့်ကြစို့။
LibreOffice နှင့် MS Office တို့သည်ပုံမှန်အားဖြင့်၎င်းတို့၏ဖိုင်များအတွက်တူညီသောပုံစံကိုမသုံးကြပါ။ ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်း LibreOffice သည် ODF ကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းတို့အတွက်မူယခင် MS Office ဗားရှင်းများသည်မိုက်ကရိုဆော့ဖကိုသာသိသောပိတ်ထားသောပုံစံ (DOC, XLS စသည်) ကိုအသုံးပြုသည်။ ၂၀၀၇ တွင် MS Office သည် OpenXML ကိုပုံမှန်အားဖြင့်အသုံးပြုသည် OOXML (DOCX, XLSX စသည်) ။ ယခင်ပုံစံနှင့်မတူဘဲ၎င်းကို (ODF) ကဲ့သို့သောပွင့်လင်းသောပုံစံတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးနိုင်ငံတကာအဆင့်သို့ရောက်ရှိနိုင်ခဲ့သည် ISO / IEC 29500.
နောက်ဆုံးပေါ် LibreOffice နှင့် MS Office ဗားရှင်းများသည်ဤပုံစံများအားလုံးနှင့်အခြားအရာများအတွက်သဟဇာတဖြစ်မှုကိုဆောင်ကြဉ်းပေးသော်လည်းအမှန်တရားမှာ၎င်းတို့သည်ပြီးပြည့်စုံမှုမရှိခြင်းဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာဖိုင်များသည်အခြားအစီအစဉ်များနှင့်တူညီခြင်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ MS Office ထက်အသုံးနည်းသောကြောင့် LibreOffice သည်၎င်းကို ပို၍ လေးနက်သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်၊ အကယ်၍ ရှောင် လွဲ၍ မရပါကအဓိကပုံစံများကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ရမည် LibreOffice သုံးစွဲသူများဖြစ်သည်။
အကယ်၍ တည်းဖြတ်ရန်မလိုအပ်ပါကဖြေရှင်းနည်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ စာရွက်စာတမ်းအား PDF သို့တင်ပို့ခြင်းနှင့်မူရင်းအစားဖိုင်ကိုမျှဝေခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် MS Office ဖိုင်များ (DOC, DOCX, XLS, XLSX, etc) နှင့် LibreOffice (ODF) ဖိုင်များအတွက်မှန်ကန်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည် MS Office စာရွက်စာတမ်းများအတွက် LibreOffice တွင်ပါ ၀ င်သောအထောက်အပံ့သည်မပြည့်စုံသော်လည်း၊ MS Office တွင် ODF အထောက်အပံ့ပါဝင်ပြီးအချို့သည်ဆိုးရွားပြီးအကန့်အသတ်ရှိသောထောက်ခံမှုများရှိသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်ဖိုင်ကို PDF format ဖြင့်မျှဝေခြင်းဖြင့်ဖိုင်ကိုဖွင့်သူများသည်၎င်းကိုပုံစံရေးဆွဲထားသည့်အတိုင်းကြည့်ရှုနိုင်ရန်သေချာစေလိမ့်မည်။ မှတ်သားသင့်သည်မှာ LibreOffice တွင်မည်သည့် extension သို့မဟုတ်ထပ်ဆောင်းအထုပ်ကိုမျှတပ်ဆင်စရာမလိုဘဲစာရွက်စာတမ်းများကို PDF သို့ပြောင်းရန်ဖြစ်နိုင်ခြေများပါဝင်သည်။ သင်ရုံသွားရန်ရှိသည် ဖိုင်တင်ပါ။ PDF အနေဖြင့်တင်ပါ။ အဲဒီလိုလုပ်ချင်တဲ့သုံးစွဲသူတွေကဒီ့တင်ပို့မှုကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်တဲ့ရွေးချယ်စရာအမြောက်အများကိုစီစဉ်နိုင်ပါတယ်၊ ဒီဟာကဒီရုံးသုံး suite မှာကျွန်တော်တွေ့ခဲ့သမျှထဲမှာအဆင့်မြင့်ဆုံးတစ်ခုပါ။
မျှဝေရန်ဖိုင်ကိုတည်းဖြတ်ရန်လိုအပ်ပါကထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အကြံပြုချက်များရှိသော်လည်းပြီးပြည့်စုံသောဖြေရှင်းနည်းများမရှိပါ။ ပထမနှင့်အရေးကြီးဆုံးမှာဤဖိုင်များကို MS Office 97/2000 / XP / 2003 format ဖြင့်သိမ်းဆည်းရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် LibreOffice ကိုအသုံးပြုပြီးအတွေ့အကြုံများစွာနှင့် OpenOffice မတိုင်မီ DOC format ဖိုင်များသည် DOCX ဖိုင်များထက်အမြဲတမ်းပိုမိုကောင်းမွန်သောအထောက်အပံ့များဖြစ်ကြောင်းသေချာစွာပြောနိုင်သည်။ XLS ဖိုင်များနှင့် XLSX ဖိုင်များအတွက်လည်းအလားတူပင်ဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်အခမဲ့ပုံစံများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အမြဲတမ်းပိုနှစ်သက်သော်လည်း MS Office တွင်အခြေခံကျသော ODF ဖိုင်အထောက်အပံ့ပါဝင်သည်။ နိဂုံးချုပ်အနေနဲ့ကံမကောင်းတာကတော့အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်ကတော့ဖိုင်ကို MS Office format နဲ့သိမ်းဆည်းဖို့ပဲ။ LibreOffice သည်ပွင့်လင်း OOXML ပုံစံထက်စီးပွားဖြစ် MS Office ပုံစံအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအထောက်အပံ့ပါဝင်သောကြောင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အမြင်အားကြီးမားသည့်ဝိရောဓိဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ဟေး၊ ဒါဝမ်းနည်းစရာအဖြစ်မှန်ပဲ။
အခြားတစ်ဖက်တွင် LibreOffice သည် ODF ပုံစံဖြင့်ဖိုင်များကိုပုံမှန်အားဖြင့်သိမ်းဆည်းသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်အခြားပုံစံဖြင့်ဖိုင်တစ်ခုကိုသိမ်းသည့်အခါတိုင်းဖြစ်နိုင်ချေရှိသောပြproblemsနာများနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့အားသတိပေးသောဆိုင်းဘုတ်ကိုရသည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပြီး MS Office 97/2000 / XP / 2003 format ဖြင့်အမြဲသိမ်းဆည်းလိုပါက၊ ဤအပြုအမူကိုပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ Tools> Options ပြီးတော့ Load / Save> အထွေထွေ။ အဲဒီမှာသင် box ကို uncheck လုပ်ဖို့ရှိသည် ကျွန်ုပ် ODF ပုံစံဖြင့်မသိမ်းပါကကျွန်ုပ်အားသတိပေးပါ နှင့် အမြဲတမ်းအဖြစ်သိမ်းဆည်းပါ ရှေးခယျြ က MS Office 97/2000 / XP ကို ​​/ 2003အောက်ကပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း။
LibreOffice တွင် Macros အတွက်အထောက်အပံ့များပါရှိသည်၊ သို့သော်၎င်းတို့ကို MS Office အသုံးပြုသောဘာသာစကားနှင့်ကွဲပြားသောဘာသာစကားဖြင့်သိမ်းဆည်းထားသည်။ LibreOffice သည် LO-Basic ဟုခေါ်သောဘာသာစကားကိုအသုံးပြုသည်။ MS Office သည် VBA ဟုလူသိများသော application များအတွက်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော Visual Basic version ကိုလျှော့ချထားသည်။ ဘာသာစကားနှစ်ခုစလုံးသည်အလွန်ဆင်တူသော်လည်း၎င်းတို့တွင်ကွဲပြားခြားနားမှုများရှိပြီးသဟဇာတမဖြစ်ပါ ဤအရာသည်မလုံလောက်သကဲ့သို့ LibreOffice တွင် VBA အတွက်အခြေခံအထောက်အပံ့ပါဝင်ပြီး MS Office တွင် LO-Basic အတွက်မည်သည့်အထောက်အပံ့မျှမပါပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ MS Office တွင်ရေးသားထားသော macros များသည် LibreOffice တွင်ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်နိုင်ခဲသည်။ နောက်ဆုံး၊ LO- အခြေခံစာရွက်စာတမ်းများ အင်္ဂလိပ်လိုတောင်မှအရမ်းဆင်းရဲတယ်။ LO-Basic ကိုကျွမ်းကျင်ရန်စိတ်ဝင်စားသူများသည်ဤဟောင်းကိုကြည့်နိုင်သည် ပရိုဂရမ်မာတွေအတွက်လမ်းညွှန်.
ဤပြproblemနာနှင့်ရင်ဆိုင်ရသောအခါအမှန်တကယ်ထွက်ပေါက်မရှိပါ။ ကျန်ရှိနေသောတစ်ခုတည်းသောအရာမှာ macros များအသုံးပြုခြင်းကိုစွန့်လွှတ်ခြင်းသို့မဟုတ် macros များအားဘာသာပြန်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အရိုးရှင်းဆုံးသော macros များသို့မဟုတ်ပိုမိုရှုပ်ထွေးသော macros များ၏ဖြစ်ရပ်မှန်တွင်အတော်လွယ်ကူသောအလုပ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကဤလုပ်ဆောင်နိုင်မှုကိုကြေငြာခဲ့သည် ဖွံ့ဖြိုးဆဲခံခဲ့ရသည်နှင့်အလုပ်လုပ်နေသောရှေ့ပြေးပုံစံပါသောဗွီဒီယိုတစ်ခုပင်ပါဝင်သည်၊ အကြောင်းပြချက်တစ်ခုမှာထိုအရာသည်ဘယ်တော့မှမအောင်မြင်ခဲ့ပါ။ Ergo, LibreOffice သည်စာရွက်စာတမ်းများကိုအတူတကွတည်းဖြတ်နိုင်သည့်စွမ်းရည်မရှိသေးပါ။
ယခုအချိန်တွင် GNU / Linux အသုံးပြုသူများအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုမှာ Google Docs, Zoho သို့မဟုတ်အခြားအလားတူ cloud service ကိုသုံးခြင်းဖြစ်သည်။ အခမဲ့ရွေးချယ်စရာများထဲမှတစ်ခုကိုမီးမောင်းထိုးပြသင့်သည် OnlyOffice y Etherpadအလုပ်လုပ်သောစာရွက်စာတမ်းများကိုလည်းပူးပေါင်းခွင့်ပြုသည်။
လုပ်ဆောင်နိုင်မှုသို့မဟုတ်အမှားအယွင်းများ (bug များ)
LibreOffice နှင့် MS Office တို့သည်တူညီသောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုမယူဆောင်လာပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ LibreOffice တွင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အရာများသည် MS Office နှင့်အပြန်အလှန်မလုပ်ဆောင်နိုင်ပါ။ ဖြစ်နိုင်သည်မှာ LibreOffice တွင် MS Office ထက်အထူးသဖြင့် MS Power Point and Access နှင့်ညီမျှသော LibreOffice Impress နှင့် Base တို့တွင်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းများပိုများသည်။
LibreOffice သို့ပြောင်းရွှေ့သောအခါဤကန့်သတ်ချက်များကိုကြိုတင်သိရှိထားရန်အရေးကြီးသည်။ အပြည့်အစုံဖတ်ရန် LibreOffice နှင့် MS Office တို့၏လုပ်ဆောင်ချက်များကိုကြည့်ရှုရန်ကျွန်ုပ်အကြံပြုပါသည် Document Foundation ဝီကီ။ သတိပြုသင့်သည်မှာဤပြissuesနာအချို့သည်ထင်ရသလောက်အလေးအနက်မထားပေ။ LibreOffice Base သည် MS Access ကဲ့သို့ပြည့်စုံမှုမရှိသည်မှာ Access သည် Access ကိုခေတ်မမီတော့သော database system တစ်ခုဖြစ်သည်ဟုမှတ်ယူရန်မလွယ်ကူပါ။ အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲဖြစ်သောကြောင့်ထို program ၏အမှားများနှင့်စပ်လျဉ်း။ အကြံပြုသည် bug ကိုသတင်းပို့ပါ ရပ်ရွာကဒါကိုပြင်နိုင်အောင်
MS Office ကိရိယာတစ်ခုစီအတွက်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုအနေဖြင့်အသုံးပြုသောပရိုဂရမ်များ၏အမည်နှင့်၎င်းတို့တွင်တစ်ခုစီအတွက်ပုံမှန်အားဖြင့်အသုံးပြုသောတိုးချဲ့ပညာများကိုလေ့လာရန်အရေးကြီးသည်။
စကားလုံး (.doc, .docx) စာရေးသူ (.odt)
Excel (.xls၊ .xlsx) calc (.ods)
ပါဝါပွိုင့် (.ppt, .pps, .pptx) အထင်ကြီးမှု (.odp)
အသုံးပြုခွင့် (.mdb, .accdb) အခြေစိုက်စခန်း (.odb)
Visio (.vsd၊ .vsdx) (.odg) ဆွဲပါ
LibreOffice သို့ရွှေ့ပြောင်းမှု protocol ကို
LibreOffice ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သည့် Document Foundation သည်ပြင်ဆင်ထားသည် ရွှေ့ပြောင်း protocol ကို မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းတွင်မဆိုရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုကိုစတင်သောအခါတွင်လုပ်ဆောင်ရမည့်အစီအမံများစာရင်းပါ ၀ င်သည့်ဤရုံးသုံးခန်းတွင်။ ဤစာရွက်စာတမ်းကိုဖတ်ရှုဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်
Microsoft Fonts ကို Install လုပ်ပါ
အချို့သောစာရွက်စာတမ်းများသည် Windows နှင့် GNU / Linux တို့တွင်တူညီမှုမရှိသောအကြောင်းပြချက်များထဲမှတစ်ခုမှာ Windows တွင်အသုံးပြုသောဖောင့်များသည် GNU / Linux တွင်မူလအတိုင်းမတပ်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ GNU / Linux နှင့်ပါ ၀ င်သောအခြားရွေးချယ်စရာများသည်အလွန်ဆင်တူသော်လည်းအချို့သောသူများသည်နည်းပညာပိုင်းအရသာလွန်သော်လည်းအတူတူမဟုတ်ပါ။
၁၉၉၆ ခုနှစ်အလွန်ဝေးကွာသောအချိန်တွင်မိုက်ခရိုဆော့ဖ်သည် "web-critical TrueType font packet" ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဤဖောင့်များသည်အလွန်ခွင့်ပြုချက်လိုင်စင်ရရှိထားသဖြင့်မည်သူမဆို၎င်းတို့ကိုထည့်သွင်းနိုင်သည်။ အဲ့ဒီတုန်းက Microsoft ကသူတို့ရဲ့ fonts တွေကိုကမ္ဘာအနှံ့မှာ standard typefaces တွေဖြစ်လာစေချင်လို့သူတို့ကိုအသုံးပြုချင်တဲ့သူတွေဆီဖြန့်ချိခဲ့တယ်။ Comic Sans MS၊ Courier New၊ ဂျော်ဂျီယာ၊ Impacto၊ Times New Roman၊ Trebuchet, Verdana နှင့် Webdings ဖောင့်များတွင် Andale Mono၊ Arial၊ Arial Negro၊ Times New Roman သည် ၂၀၀၇ ခုနှစ်အထိရုံးစာရွက်စာတမ်းများအတွက်ပုံမှန်စာလုံးပုံစံဖြစ်ခဲ့သည်ကိုသတိရပါ။
Microsoft ရဲ့ Clear Type ဖောင့်ကိုလည်းထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ ဤအရင်းအမြစ်များမှာ Constantia, Corbel, Calibri, Cambria, Candara နှင့် Consolas တို့ဖြစ်သည်။ Calibri သည် 2007 Word ဗားရှင်း မှစ၍ Microsoft Word တွင်ပုံမှန် font ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ကံမကောင်းစွာပဲမိုက်ခရိုဆော့ဖ်ဟာ True Type ဖောင့်တွေလိုပဲအများပြည်သူအတွက်ဒီဖောင့်တွေကိုဘယ်တော့မှမထုတ်ပြန်ခဲ့ပါဘူး။ သို့သော်၎င်းစာလုံးများကို၎င်းကို PowerPoint 2007 Viewer ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနှင့်အခမဲ့ download လုပ်နိုင်သည်။ ဤအခြေအနေကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီး Microsoft PowerPoint Viewer ကို download လုပ်ရန်၊ Clear Type ဖောင့်များကိုထုတ်ယူပြီးသင်၏ GNU / Linux စနစ်တွင်ထည့်သွင်းမည့် script တစ်ခုကိုသုံးနိုင်သည်။
ဤပုံမှန်ဖောင့်များကို LibreOffice တွင်အသုံးပြုရန်၊ ကိရိယာများ> ချိန်ညှိချက်များ ပြီးတော့ LibreOffice Writer> အခြေခံစာလုံးများအောက်ကပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း။
သင်၏ GNU / Linux အသုံးပြုသူအနေဖြင့်သင်၏အတွေ့အကြုံကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီး LibreOffice သို့ပြောင်းရန်စဉ်းစားနေသောအသုံးပြုသူများအားအခြားမည်သည့်မေးခွန်းများကိုသင်အကြံပြုမည်နည်း။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » GNU / Linux များ » MS Office မှ LibreOffice သို့အသွင်ကူးပြောင်းမှုကိုပိုမိုလွယ်ကူအောင်ပြုလုပ်နည်း
ငါ LibreOffice ကိုပြောင်းရွှေ့ပြီး ၅ နှစ်လောက်အကြာမှာများစွာသောအပြောင်းအလဲကိုကူးစက်ခဲ့တယ်။ အကြှနျုပျ၏လှည့်ကွက်မည်သူမဆိုနှောင့်ယှက်ဖို့မဟုတ်ပါဘူး။
၀ င်းဒိုး suite တွေနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေကငါ့ကိုစာရွက်စာတမ်းတွေပို့တဲ့အခါငါကငါ့ရဲ့အစိတ်အပိုင်းကို formats, doc နဲ့ odf နှစ်ခုလုံးပြန်ပို့လိုက်တယ်။ ငါဥပမာအားဖြင့်သူတို့သည်ငါ့လက်၌ရှိပြီးနောက်အလုပ်လုပ်ရန်ဘယ်လောက်အလင်းဖြစ်ကြောင်းထောက်ပြသည်။ စကားစမြည်စပြောပြီးတဲ့နောက်သူတို့ကိုငါ suite အကြောင်းပြောပြတယ်၊ အဲဒါကိုသူတို့ရဲ့ Windows (သို့) Mac စက်တွေမှာ install လုပ်ဖို့၊ အဲဒါကိုစမ်းကြည့်ဖို့၊ ပရိုဂရမ်နှစ်ခုရှိဖို့နဲ့အလုပ်တစ်ခုရဲ့အမြန်နှုန်းကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနှိုင်းယှဉ်ဖို့ပြောတာ။
ငါ Libre ကိုပိုမိုထိရောက်မြန်ဆန်အဆင်ပြေခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါ suite ကိုစွန့်ခွာသူကိုပူးပေါင်းသို့မဟုတ် client များအမှုပေါင်း, လအနည်းငယ်အကြာတွင်စီးပွားဖြစ် OS ကိုလည်းရှိသည်။
ငါတို့အများစုဟာအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲကိုဘာကြောင့်သုံးကြတာလဲ။ သူတို့ကထိရောက်တဲ့ကုန်ထုတ်စွမ်းအားလိုချင်တယ်။ ကျွန်တော့်အတွေ့အကြုံအရ၊ windows ကိုဆန့်ကျင်ခြင်းနှင့်သီးခြားထုတ်ကုန်ထုတ်ယူခြင်း မှလွဲ၍ အခြားအနေဖြင့် GNU linux ၏မျက်နှာသာပေးမှုနှင့်ဖြန့်ဝေခြင်းတို့ကိုထည့်သွင်းမထားပါ။
ကျွန်တော့်အတွေ့အကြုံအရ LibreOffice မှာဖိုင်တွေကိုသူတို့ဖွင့်ထားတဲ့ format နဲ့သိမ်းဆည်းပြီးရုံးသုံး suite ကိုအသုံးပြုတဲ့သူဆီပို့ချင်တဲ့အခါ MS Office ပုံစံနဲ့သိမ်းထားတာပိုကောင်းတယ်။
အကယ်၍ ၎င်းကိုအစမှပိတ်ထားသောပုံစံဖြင့်သိမ်းဆည်းပါက၊ စာရွက်စာတမ်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ဖွင့်တိုင်းတိုင်းသည်ကွဲပြားသည် (သို့) စတိုင် / ပုံစံပြproblemsနာများဖြစ်နိုင်သည်။ အမှားများကိုပြုပြင်သော်လည်း LibreOffice တွင်ပြန်ဖွင့်သောအခါသူတို့သည်ပေါ်လာပြန်သည်။
ကျွန်ုပ်တွင်ဖောင့်၏ script နှင့်ပြproblemနာရှိနေသည်။
Aspire @ jose: ~ $ ./vistafonts-installer
bash: ./vistafonts-installer: / bin / sh ^ M: bad interpreter: ဖိုင်သို့မဟုတ်ဖိုင်တွဲမရှိပါ။
ဖိုင်တွဲသည်ဖိုင်တွဲထဲတွင်ရှိသည်။ ~ /
သငျသညျ chmod + x ကို vistafonts-installer နှင့်အတူကွပ်မျက်ခွင့်ပြုချက်ကိုသတ်မှတ်ရန်ရှိသည်။
ငါ execute permissions ကို file ထဲမှာထားလိုက်ရင်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ငါဟာ emir | အနေနဲ့လက်နဲ့လုပ်မယ်
၎င်းကိုဝင်းဒိုးမှတည်းဖြတ်သည်၊ ဝင်းဒိုးထားသည့် line break ဆိုလိုသောလျှို့ဝှက်စာလုံးများကိုသင်ဖယ်ရှားရမည်။ dos2unix လုပ်ပေးတဲ့ပရိုဂရမ်လေးတစ်ခုရှိတယ်။ သူတို့ကို "apt-get install dos2unix" ကိုထည့်သွင်းပြီးပေါ်လာတဲ့ ^ M ကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါ။
ငါ script ကို run နိုင်ရန်အတွက်ငါပြုပြင်မွမ်းမံရန်လိုအပ်သောဖိုင်ကိုရှာမတွေ့ပါ။ နာမည်ကဘာလဲ၊ ငါဘယ်အတိအကျထဲငါရှာမလဲ။
အမှန်တကယ်ရွေးချယ်စရာကို wps office ဟုခေါ်သည်။ ၎င်းသည် Microsoft Office ၏ကိုယ်ပွားဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူအများစုသည်ပိုကောင်းသော WPS ကြောင့်အကြောင်းပြချက်ကြောင့် Microsoft Office ၏ interface ကိုအသုံးပြုကြသည်။
WPS သည်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ Libre အစားထိုးအနေဖြင့် LibreOffice သို့မဟုတ် OpenOffice သည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
| emir | ဟုသူကပြောသည်
Jose ကဲ့သို့ script နှင့်ပတ်သက်သောပြproblemနာ, ကျွန်ုပ်၏ OS သည်ဆက်နွယ်မှုမရှိ၊
ငါဖတ်ပြီး font files တွေကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီး Terminal ကနေတစ်ဆင့်သူတို့ကို install လုပ်ဖို့လမ်းညွှန်တွေရတယ်။
| emir | စာပြန်ရန်
အဲ့တာမှန်တယ်။ ငါ Calc နှင့်အတူသင်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြရန်မေ့လျော့ ... ငါသူတို့ Writer ၌ဤဖွင့်ဖို့စောင့်ဆိုင်းနေကြတယ်ဆိုတာကိုငါနားမလည်ဘူး။
ယခုအပတ်မှာပင်ကျွန်ုပ်သည် Microsoft ၏ suite ကိုအသုံးပြုခြင်းကိုရပ်ဆိုင်းရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သော software ဖြစ်ပြီးအခမဲ့ဗားရှင်းသို့ပြောင်းရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် Linux နှင့် Windows တွင်နှစ်ပေါင်းများစွာအိမ်တွင်းသုံးခဲ့ဖူးသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ Outlook အစား Thunderbird နှင့် Office အစား LibreOffice ။
ငါသည်အခြားလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်ဖောက်သည်များ၏စာရွက်စာတမ်းများနှင့်သဟဇာတဖြစ်ရန် Office ကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာထိန်းသိမ်းထားသော်လည်း၊ ၎င်းတို့နှင့်စာရွက်စာတမ်းများဖလှယ်မှုသည်အနည်းဆုံးဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်သည်အကြီးမားဆုံးအသုံးပြုမှုဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ်ပိုင်စီးပွားဖြစ်ဆော့ဝဲလ်သုံးရန်အကြောင်းပြချက်မရှိကြောင်းနားလည်ခဲ့သည် များစွာသောအခြားကိစ္စများတွင်လိုပဲတစ် ဦး မသင့်တော်မူရင်းရှိပါတယ်။
စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးနည်းလမ်း ... အေးအေးဆေးဆေး၊ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်အားစာရွက်စာတမ်းတစ်ခုတောင်းခံပါကကျွန်ုပ်သည် LibreOffice မှကူးပြောင်းသော ODF နှင့်ကုမ္ပဏီ၊ PDF သို့မဟုတ် Microsoft ပုံစံများကိုရွေးချယ်လိမ့်မည်။ အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်အဘယ်ကြောင့်ဤမျှရိုးရှင်းလွယ်ကူသောစီးပွားဖြစ်ဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) ကိုအသုံးပြုကြသည်ကိုအစဉ်အမြဲတွေးမိခဲ့ဖူးသည်။
အမှန်တရားကတော့ Excel ဟာ Calc ထက်အများကြီးသာလွန်တယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲငါကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ ၁၀၀,၀၀၀ ကျော်နဲ့တွဲလုပ်တဲ့အခါ Excel အားလုံးအပြည့်နဲ့သူ့ရဲ့ macros တွေကိုပရိုဂရမ်ရေးဖို့အရမ်းလွယ်ကူတဲ့အချိန်မှာမင်းအဲဒီမှာတွေ့ရလိမ့်မယ်။ အသွင်အပြင်အပြင် suite, Calc သည်ရုံးအစားခိုင်မာသောအခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်စေရန်များစွာတိုးတက်ရန်လိုအပ်သည်။
ငါလည်းအတူတူပဲ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ MS Excel ၏စံနှုန်းနှင့်မကိုက်ညီသော်လည်းသုံးစွဲသူများ၏ ၉၀% သည်ပရိုဂရမ်၏သေးငယ်သောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုထက်ပိုပြီးမသုံးကြပါ… LibreOffice သည် သူတို့အား "အခြေခံ" ပစ္စည်းပစ္စယအတော်လေးကောင်းစွာလုပ်ပါ။
ဤပြproblemနာကို LibreOffice မှတ်ဉာဏ်အပိုင်းကိုပြုပြင်ခြင်းအားဖြင့်ဖြေရှင်းပြီးပြီ၊ သင်သတ်မှတ်ထားသောပမာဏပမာဏကိုတိုးမြှင့်ရမည်။
ငါ့အလုပ်ခွင်တွင် ApacheOpenoffice ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန် "ဆင်းရဲဒုက္ခ" ခံရပြီးနောက်ထင်မြင်ချက်။
- စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုဖွင့်ခြင်းသည် MSOffice ဖြင့်စတင်ရန်ထက် ၅-၆ ဆပိုကြာသည်။ ဒီ၏အကျိုးဆက်
အကယ်၍ သင်သည်နေ့လည်ခင်းတူညီသောစာသားကိုရေးသားခြင်းကိုသင်ပြုလုပ်မည်ဆိုပါက၎င်းသည်သင့်အတွက်အရေးမကြီးဟုထင်ရလိမ့်မည်မဟုတ်သော်လည်းကျွန်ုပ်နှင့်ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည်ဖိုင်များဖွင့်ခြင်းနှင့်ပိတ်ခြင်းကိုဖိုင်တစ်ခုချင်းစီမရေးမီဖိုင်တစ်ခုစီ၏အခြေအနေကိုစစ်ဆေးရန်အတွက်သုံးစွဲကြသည်။ ကြောင်းဖိုင်ကို update လုပ်သောစာသား၏။
များသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖိုင်၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကိုအစမှရှင်းပြရန်ပြင်ပမှလူများသောအားဖြင့်များသောအားဖြင့်၎င်းတို့၌သတင်းဆိုးများကိုပေးရခြင်းပါဝင်သည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့ကိုအရည်အချင်းပြည့်ဝသောဖြစ်ရပ်များကိုပြောပြနိုင်မည့်အစား၊ သတင်းဆိုးနဲ့သတင်းဆိုးကြားမှာ…
သူတို့မှာသူတို့၏အဖိုးထိုက်သောအချိန်ကိုကြားဖြတ်။ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအမြင်များဖြင့်သူတို့၏ဖန်ခွက်ရုံးကိုစွန့်ခွာရန်ဆုံးဖြတ်သောအထက်လူကြီးများရှိသည်။ သူတို့ထံမှကျွန်ုပ်တို့တောင်းဆိုသည့်တစ်ခုတည်းသောအရာက၎င်းတို့အား၎င်းတို့လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုချက်ချင်းပေးရခြင်းဖြစ်သည်။ မင်းရဲ့သူဌေးကလည်ပင်းနောက်မှာရှူရှိုက်နေတဲ့တစ်မိနစ်၊ နှစ်နှစ်ခွဲ၊ နှစ်၊ သုံး၊
ထို့အပြင်ငါပြန်လည်စတင်ခြင်းအကြောင်းအရာကိုမထိတွေ့ကြောင်းသတိပြုပါစေ၊ သူဌေးက“ အခုအခု OpenOffice နဲ့လူတိုင်း” ကိုပြောလိုက်ရင်ငါတို့ကအရှိန်မြင့်လာပြီးအဲဒါကငါတုန့်ပြန်မယ့်အချိန်အကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်ဘူး၊ ..
ကျွန်ုပ်အတွေ့အကြုံအရ LibreOffice ဖြင့်ဖိုင်များကိုဖွင့်ခြင်းနှင့်ပိတ်ခြင်းအတွက်နှောင့်နှေးခြင်းသည် MS Office format (.doc, .docx, .xls, .xlsx, etc) ရှိဖိုင်များအထူးသဖြင့်သိသာသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်မူရင်း LibreOffice ဖိုင်များကိုဖွင့်သောအခါသူတို့သည်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာသွားနိုင်သည်။
ဒါဆိုဖြစ်နိုင်ရင်မူလ LibreOffice ဖိုင်တွေကိုသုံးဖို့ပါ။
မျှဝေမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ အမှန်တရားကတော့ကျွန်ုပ်လိုအိမ်၊ အသုံးပြုသူ၊ ငါကဲ့သို့သောတစ်စုံတစ် ဦး အတွက်အသိပညာတိုးချဲ့ခြင်းသည်ကောင်းမွန်သောခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် GNU / Linux ကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းတွင်ရှိပြီးဖြစ်သောအလားအလာများ၊ ကိရိယာများနှင့်အသုံးချပရိုဂရမ်များနှင့်ဤ Libre Office တို့ကိုကျွန်ုပ်ကျေနပ်သည်။ ငါကပြီးပြည့်စုံသောအခြားဘာမှမလိုအပ်ပါဘူးကတည်းကငါ့အဘို့စိတ်ကူးဖြစ်ပါတယ်! ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်အတွက်အရေးကြီးသော pdf ဖိုင်များကိုပုံနှိပ်ရန်အခြားပလပ်အင်များကိုတပ်ဆင်စရာမလိုတော့ပါ။
ဒီရုံးကို ၀ င်ချင်တဲ့သူတိုင်းကိုအားပေးပါတယ်။ ကြိုးစားတာကဘာမှမဆုံးရှုံးဘူး၊
သူတို့ဖော်ပြရန်မေ့နေသောအချက်တစ်ခုမှာအသွင်အပြင်ဖြစ်သည်။ MSoffice တွင်အရောင် (၃) ခုသာ (အနက်၊ အပြာနှင့်ငွေရောင်) ရှိသည်။ LibreOffice တွင်အရောင်များနှင့်နောက်ခံများကိုရွေးချယ်ရန်အဆုံးမဲ့ဖြစ်နိုင်ချေများရှိသည်။ ၎င်းသည်မျက်စိကိုနှစ်သက်သည်။
ကိရိယာများ - ရွေးစရာများ - စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ခြင်း - အခင်းအကျင်းကိုရွေးပါ။
Open Source ၏အလှဆုံးရှုထောင့်တစ်ခုမှာအရည်အသွေးမြင့်ကုန်ပစ္စည်းကိုအခမဲ့နှင့်တရားဝင်ရုံးအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်
အသွင်သဏ္differencesာန်၊ ကိုင်တွယ်ခြင်း၊ ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ခလုတ်များ၊ ဖြတ်လမ်းများနှင့်အခြားအရာများကွဲပြားသော်လည်းအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲစတင်ခြင်းကိုရှုပ်ထွေးစေပြီးအရာ ၀ တ္ထုအားဖြင့်အတူတူပင်လုပ်ဆောင်သည်ကိုရှုပ်ထွေးစေသည်။
ဌာနကြီးတစ်ခုစီတွင်ရာနှင့်ချီသော Linux ဖြန့်ဝေမှုများသည်ကြီးမားသောစနစ်တစ်ခုကိုဖန်တီးမည့်အစား“ စည်းလုံးညီညွတ်ခြင်းသည်ခွန်အား” ဟူသောစကားစုကိုလျစ်လျူရှုခဲ့သည်။
အကယ်၍ ၎င်းတို့သည်အနည်းဆုံးသဟဇာတဖြစ်သောသဘောတရားများနှင့်အားထုတ်မှုများကိုပေါင်းစည်းလျှင်တိုးတက်မှုသည်ကြီးမားလိမ့်မည်။ အခြားသူများအနက် LibreOffice, OpenOffice, KOffice, GnomeOffice, တစ်ခုချင်းစီသည်သူတို့၏နည်းလမ်းအတိုင်း "မတူညီသောလုပ်ရပ်" တွင်မရေမတွက်နိုင်သည့်အသုံးချပရိုဂရမ်များ၌ယှဉ်ပြိုင်ကြသည်။ တချို့ကအခြားသူတွေထက်ဒေါ်လာပိုကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့ဒါကတကယ်မကူညီဘူး။
LO နှင့် OO တို့သည်ပေါ့ပါးသောကြည့်ရှုသူကိုတီထွင်ခဲ့ကြသောကြောင့်ရွှေ့ပြောင်းခြင်းကိုကူညီရန်အရာတစ်ခုအနေဖြင့်၎င်းသည် linux တွင်ပါက PPTVIEW အထုပ် (သင်ဝိုင်လိုအပ်သည်) ကိုကောင်းမွန်စွာကြည့်ရှုနိုင်ရန်သင်လိုအပ်သည်။ pp * အမြောက်အများကိုတွေ့မြင်ရန်ကြိုးစားခြင်းသည် MSO တွင်တည်ရှိပြီး load လုပ်ရန်ပိုမိုမြန်ဆန်သည့်သေးငယ်။ အလင်းကြည့်ရှုသူများအစားလေးလံသော Libre / Open Impress များအားလုံးကိုတင်ရန်အချိန်တိုင်းနှေးသည်။ windows များတွင် LO ကိုသာသုံးသည်၊ သို့သော် powerpoint viewer ကိုတူညီသောအကြောင်းပြချက်ဖြင့်ထည့်သွင်းသည်
ငါ့မှာ LO တင်ပြတဲ့ bug နဲ့ error log ရှိတယ်၊ developer တွေဆီပို့ဖို့စောင့်နေတယ်
ဒံယလေကအေ Rodriguez ဟုသူကပြောသည်
LibreOffice 4.4 မှစတင်ကာမိုက်ခရိုဆော့ဖ်၏ Calibri နှင့် Cambria ဖောင့်များကိုအခြားရွေးချယ်စရာနှစ်ခုရှိသည်။ သူတို့ကိုသာထည့်သွင်းရန်
apt-get ထည့်သွင်းပါ fonts-crosextra-carlito fonts-crosextra-caladea
အကယ်၍ သင်သည်အနောက်ဥရောပဘာသာစကားများ၊ တူရကီ၊ သင်္ချာသင်္ကေတများနှင့်အရှေ့ဥရောပဘာသာစကားများကိုအထောက်အပံ့လိုအပ်လျှင်ဤအထုပ်ကိုထည့်သွင်းနိုင်သည်
ttf-bitstream-vera ကို install လုပ်ပါ
Daniel A. Rodriguez အားပြန်ပြောပါ
ပူးပေါင်းအသုံးပြုခြင်းအကြောင်းအရာတွင် Sironta ဟုခေါ်သောကိရိယာတစ်ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်ဖတ်ပြီးသည်မှာ၎င်းသည်အခမဲ့ဖြစ်ပြီးအခကြေးငွေပေးထားသောဗားရှင်းရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သော်လည်း၎င်းသည် OpenOffice နှင့် Open Source suites များနှင့်ကောင်းသောပေါင်းစည်းမှုကိုပေးသည်။ .ရာဝတီ။ တစ်စုံတစ် ဦး ကစိတ်ဝင်စားလျှင်၊ ၎င်းသည်မည်သည့် platform (Windows, Mac OS X နှင့် Linux) အတွက်ဖြစ်ပါစေကျွန်ုပ် link ကိုချန်ထားသည်။ ဤသည်မှာ url ဖြစ်သည်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, ငါကကြိုးစားခဲ့ကြပြီမဟုတ်ပေမယ့်ဟေး, အချိန်ရှိသူတစ် ဦး ကလုပ်နိုင်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုထင်ဟပ်နှင့်ရလဒ်ကောင်းပေးမလားကြည့်ပါ။
ငါ့မှာ Access 2003 မှာ applications တွေရှိတယ်။ သူတို့ကို WPS Office နဲ့ဖွင့်ချင်တယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိဘူး
ကောင်းသောနေ့လည်ခင်း, calcou ဖိုင်ကို linoux ရှိစာရေးဆရာတစ် ဦး အဖြစ်ကျွန်ုပ်မည်သို့ပြောင်းလဲရမည်နည်း။
ကွင်းခတ် ၁.၁ အချိန်ဖြုန်းပြီးနောက်ဘာအသစ်လဲ။